Global Voices teny Malagasy · Raveloaritiana Mamisoa – Oktobra 2011
Tonizia: Ny Fifidianana 23 oktobra Fitsapana Demokratika Lehibe
Andro vitsivitsy sisa no andrasana ka itsapana voalohany amim-pomba demokratika ny “Lohataona Arabo” izay nampianjera fitondrana jadona telo tany Tonizia, Ejipta ary Libya. Ny alahady 23 oktobra ho avy izao no hifidy ny antenimieram-panorenana handrafitra ny Lalampanorenana vaovao sy hanangana governemanta tetezamita ny Toniziana. Andrasana fatratra ny fifidianana any Tonizia, izay...
17 Oktobra 2011
Mpanoratra Nermeen Edrees · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Notsarovana sy noresahan'ireo mpandray anjara marobe manokana i Syria tamin'ny Fihaonan'ny Bilaogera Arabo andiany fahatelo tao Tonizia tamin'ity herinandro ity. Tsy nolazaina firy tamin'ny adihevitra momba ny Syria ny fifaliana nateraky ny revolisiona tao Tonizia sy Ejypta, izay ahitana ny fitomboan'ny herisetra ataon'ny fitondrana, mananika ny 3000 ireo namoy ny ainy, kanefa...
07 Oktobra 2011
Tontolo Arabo: Mandria Am-piadanana Steve Jobs
Misaona ny tontolo Arabo noho ny fahafatesan'i Steve Jobs , mpitarika manana vina ao amin'ny orinasa Apple. Mameno ny valantserasera ny Fanomezam-boninahitra azy ary taitra tamin'ny torimasony ny mpiserasera raha nandre ny vaovao. Avy any Arabia Saodita, Aziz Shalan ni-tweet hoe: شكراً ستيف، ماقدمتة لنا ليس منتجات ربحية، بل فرصة لتغير...
06 Oktobra 2011
Fihaonan'ny Bilaogera ao Tonizia Andian'ny Fahatelo
Nisokatra tamin'ny Alatsinainy 3 oktobra tao Tonizia ny Fihaonana fahatelo ny bilaogera arabo, valandresaka no nisantarana izany. Niara-nikarakara ity fihaonana ity ny Global Voices, Nawaat sy ny fikambanana Heinrich Böll ; teo amin'ny bilaogera an-jatony teo izay saiky avy amin'ny firenena Arabo no nandray anjara tamin'izany. Mazava ho azy, fa voatantara betsaka tamin'ny...